Aza ampiadiana ny samy kristianina – Malag@sy Miray
Teny fohy teny vitsy no entina manazava ny lohateny. Hita sy tsapa mantsy izao fa misy ireo olona mitady hampiady ny samy krisitainina, na ireo hoe mpitondra na ireo hoe mapnohitra dia mitady hametraka izany fahasamihafana izany ankehitriny.
Nisy ny hetsika nataon’ireo mpitandrina vitsivitsy tetsy antsahamanitra tamin’ny asabotsy ka nilazany fa ho mpanohitra ireo FJKM. Azo lazaina fa manana ny zony hanambara izany izy ireto saingy ny manahirana dia ireto mpitondra misoleladelaka amin’ny EKAR.
Marihina fa tsy ny kâtolika rehetra akory no manohana sy mankasitraka ny fitondrana misy ary marihina ihany koa fa maro ireo minisitra mpivavaka amin’ny FJKM no amin’ity fintondrana misy ity ka tsy dia tsara loatra angamba raha amin’ny anaran’ny fivavahana no itondrana izany firehana politika izany na dia ekena aza fa ny fivavahana dia anisan’ny fomba natao hitantanana hatramin’izay ka hatramin’izao na teto Madagasikara na tany ivelany.
Mbola tsy eto amintsika no tokony hisy izany ady masina sy fanafihana « masina » izany raha tsy hoe ady amin’ny devoly angaha no atao ka tafiditra amin’izany ny mpanao pôlitika maromaro dia amin’izay dia mitombina tsara izany rehetra izany.